Baaderiga Vatacanka oo booqasho ku jooga wadanka Marooko. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 31, 2019 986 0
Magaalada Ar-ribaad ee caasimadda wadanka Marooko, waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayo baadariga kaniisadda Vaticanka ninka lagu magacaabo Bob Faransiis.
Waxaa garoonka kusoo dhaweeyey boqorka Marooko, Muxamad As-saadis, iyo masuuliyin kala duwan oo katirsan dowladda, kuwaas oo la arkayay iyagoo mucaanaqeynaya baadariga nasraaniga ah.
Bob Faransiis iyo Muxamed As-saadis ayaa shir jaraa’id oo wadajir ah waxay ku qabteen masjidka Xassaan ee magaalada Ar-ribaad, waxayna sheegeen iney muhiim tahay in la ilaaliyo waxay ugu yeeraan “midnimada diimaha iyo ka hortaga xagjirnimada”.
Bob Faransiis ayaa amray in la qaado tallaabooyin muuqda oo uu ku sheegay in lagula dagaallamo wuxuu ku tilmaamay argagaxisada oo uu ula jeedo Islaamka xaqiiqda ah.
Dhinac kale boqorka Marooko ayaa sheegay in la meel mariyo siyaasadda ah in diinta Islaamka lagula dagaallamo diin, taas oo ah siyaasad ay dejiyeen Maraykanka oo ah in dadka muslimiinta eek u taagan wadada saxda ah looga hortago wadaado iyo culimaa’’u suu ku fakar ah siyaasadda guud ee Reergalbeedka.
Booqashada baadarigaVaticanka uu ku yimid Marooko ayaa imaaneysa iyado sidoo kale dhawaan uu booqasho ku tagay wadanka Imaaraadka carabta, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey, waxaana socda olole ballaaran oo dadka muslimiinta ah looga leexinayo diintooda toosan.